မြစ်ကြီးနားက C D Mတွင် ပါဝင်သော ကျောင်းဆရာမနှစ်ယောက်ဦး ဖ မ်း ဆီ ခံ ရ – Shwe Myanmar
Posted on February 20, 2021 by Shwe Myanmar
မြစ်ကြီးနားက C D Mတွင် ပါဝင်သော ကျောင်းဆရာမနှစ်ယောက်ဦး ဖ မ်း ဆီ ခံ ရ
မြစ်ကြီးနား၊ ပညာရေးကောလိပ်ရှေ့မှာ CDM လုပ်နေတဲ့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက ဆရာမနှစ်‌ယောက်ကို တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီနေ့မနက် အင်အားသုံး အကြ.မ်းဖ က်ဖ.မ်း.ဆီးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက.. သိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနား အမက ကျောင်းက ဆရာမ တစ်ယောက်နဲ့ ဝိုင်းမော်က ဆရာမတစ်‌ယောက်တို့ဟာ မြစ်ကြီးနားမြို့ လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းရှေ့
စုရပ်နေရာမှာ ဆိုင်ကယ်ထားနေချိန် ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံး.. ဖ.မ်း.ဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။”ရဲကား ငါးစီး၊ ခြောက်စီးလောက်က ဝင်ဖ.မ်းတာ။ အဲဒီနေရာမှာတော့ ဆရာမနှစ်ယောက်၊ အခု ထပ်တိုး ဆရာမတစ်ယောက်လို့ သိရတယ်။ ဘယ်မှာဖ.မ်းထားတယ်ဆိုတာ. မသိရသေးဘူး။ နောက်ထပ်လည်း CDM လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်း(၁၁)ယောက်ကို ဖ.မ်းဆီးထားတယ်လို့ သိရတယ်။
”လို့ မြစ်ကြီးနားမြို့က ရှေ့နေတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။အခုလည်း လေ.းဂွနဲ့ လို.က်ပ.စ်နေသလို.. သွားလာနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်‌တွေကို ရပ်တန့်စစ်ဆေးတာ၊ မသင်္ကာရင် ဖ.မ်း.ဆီးတာတွေလုပ်နေလို့ ဖ.မ်း.ဆီးခံရသူ အရေအတွက် တိုးလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံးပြီး
လမ်းကြားတွေ၊လမ်းသွယ်. တွေကို ပိတ်တာကြောင့် ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ရွေ့လျားပုံစံနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် ပုံမှန်စုရပ်နေရာ‌တွေဖြစ်တဲ့ နောင်ရာပါကွင်းနဲ့ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်ရှေ့ နေရာတွေမှာလည်း တပ်မတ်ာက ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မွဈကွီးနား၊ ပညာရေးကောလိပျရှမှေ့ာ CDM လုပျနတေဲ့ အခွခေံပညာဦးစီးဌာနက ဆရာမနှဈ‌ယောကျကို တပျနဲ့ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှကေ ဒီနမေ့နကျ အငျအားသုံး အကွ.မျးဖ ကျဖ.မျး.ဆီးသှားတယျလို့ ဒသေခံတှဆေီက.. သိရပါတယျ။မွဈကွီးနား အမက ကြောငျးက ဆရာမ တဈယောကျနဲ့ ဝိုငျးမျောက ဆရာမတဈ‌ယောကျတို့ဟာ မွဈကွီးနားမွို့ လကေ့ငျြ့ရေးကြောငျးရှေ့ စုရပျနရောမှာ
ဆိုငျကယျထားနခြေိနျ ရဲတပျဖှဲ့က အငျအားသုံး.. ဖ.မျး.ဆီးသှားတာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။”ရဲကား ငါးစီး၊ ခွောကျစီးလောကျက ဝငျဖ.မျးတာ။ အဲဒီနရောမှာတော့ ဆရာမနှဈယောကျ၊ အခု ထပျတိုး ဆရာမတဈယောကျလို့ သိရတယျ။ ဘယျမှာဖ.မျးထားတယျဆိုတာ. မသိရသေးဘူး။ နောကျထပျလညျး CDM လုပျနတေဲ့ ဝနျထမျး(၁၁)ယောကျကို ဖ.မျးဆီးထားတယျလို့ သိရတယျ။
”လို့ မွဈကွီးနားမွို့က ရှနေ့တေဈယောကျက ပွောပါတယျ။အခုလညျး လေ.းဂှနဲ့ လို.ကျပ.ဈနသေလို.. သှားလာနတေဲ့ ဆိုငျကယျ‌တှကေို ရပျတနျ့စဈဆေးတာ၊ မသင်ျကာရငျ ဖ.မျး.ဆီးတာတှလေုပျနလေို့ ဖ.မျး.ဆီးခံရသူ အရအေတှကျ တိုးလာနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ရဲတပျဖှဲ့က အငျအားသုံးပွီး
လမျးကွားတှေ၊လမျးသှယျ. တှကေို ပိတျတာကွောငျ့ ဆန်ဒပွသူတှဟော ရှလြေ့ားပုံစံနဲ့ ဆောငျရှကျနကွေတယျလို့ သိရပါတယျ။လူထုဆန်ဒဖျောထုတျဖို့အတှကျ ပုံမှနျစုရပျနရော‌တှဖွေဈတဲ့ နောငျရာပါကှငျးနဲ့ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျရှေ့ နရောတှမှောလညျး တပျမတျာက ပိတျဆို့ထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
Previous PostPrevious လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာပျံ့နှံ့လာတဲ့ ဂျွန်လွင်ရဲ့ မော်ဒယ်များကို CDMအားမပေးဖို့ ပြောနေတဲ့”အသံဖိုင်”
Next PostNext အာ ဏာ သိမ်း စစ် အ စိုး ရ ရဲ့ ဖ.မ်းဝရ.မ်းထုတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရဲ့ ရဲရဲတောက်ကဗျာ “တောက်ခေါက် အံကြိတ်သံ”